6 amin'ireo Dock malaza indrindra ho an'ny Ubuntu sy ny derivatives | Ubunlog
6 amin'ireo dock malaza indrindra ho an'ny Ubuntu sy ny derivatives
Ny fampiasana Ny Dock ao amin'ny rafitray dia matetika manatsara ny fomba fampandehananay ny rindranay Ny fisiana ara- miaraka amin'ny hitsin-dalana ho azy ireo amin'ny fomba hafainganam-pandeha ankoatr'izay dia azo ampidirina amin'ny fomba tena tsara amin'ny tontolon'ny birao misy antsika.
Izany fomba izany azontsika atao ny mampifanaraka azy ireo ary manome endrika tsara ny birao miaraka amin'ny fanampian'ireo. Amin'ity lahatsoratra ity dia hizara ny sasany amin'ireo dock malaza indrindra azontsika atao amin'ny rafitray.
Andao atomboka amin'ny iray amin'ireo malaza indrindra.
1 Dock Kairo
2 hazo fisaka
3 Advance Window Navigator
5 Gnome Dashboard
Ity dock ity manome fomba iray handefasana fampiharana amin'ny alàlan'ny takelaka sy mpandefasa eo amin'ny farany ambany efijery.
Ilay docka ahitanao ny menio sy kisary ilaina hafatoy ny fahaizana mifandray amin'ny tamba-jotra tsy misy tariby sy milalao dian-peo.
Ny dock dia azo apetaka amin'ny ambony, ambany ary amin'ny lafiny roa amin'ny efijery ary azo ampanjifaina araka ny itiavanao azy.
Ho an'ny fametrahana azy ireo dia tsy maintsy manokatra terminal izy ireo ary manatanteraka:
Dock plank dia mpandefa rindrambaiko maivana satria tsy mila fahatsiarovana be loatra. Ahafahanao manamboatra ireo takelaka fikirakirana mora foana, eo amin'ireo mampiavaka azy no hitantsika:
Manamboatra ny fomban'ny tontonana.
Ovao ny lohahevitra tontonana.
Manampia lohahevitra vaovao.
Fanesorana ireo lohahevitra tsy ilaina.
Fampiharana vondrona amin'ny sokajy
Mba hametrahana azy dia tsy maintsy soratantsika:
Advance Window Navigator
Avant Window Navigator dia dock eo ambanin'ny biraonao izay mandefa fampiharana, misy applet, miasa ho toy ny lisitra fikandrana, ary maro hafa. Avant dia tena mora ny mametraka, mandany loharano vitsivitsy ary mora ny mitantana. Izy io dia manana fanohanana ho an'ireo mpandefa an-tserasera, lisitra tokony hatao, ary fampiharana an'ny antoko fahatelo.
Mba hametrahana azy ao amin'ny rafitrao dia tsy maintsy soratanao:
sudo add-apt-repository ppa:mbaum2000/avant-window-navigator
sudo apt install --install-recommends avant-window-navigator
docky dia mpandefa iray azo avy amin'ny Gnome Do izay ahafahana mandamina ireo rindranasa be mpampiasa indrindra ao amin'ny Ubuntu amin'ny fomba hafa. Izy io koa dia misy add-on isan-karazany antsoina hoe docklet sy mpanampy izay mamela anao hifandray amin'ireo rindranasa toa ny Tomboy, Rhythmbox, Liferea na Transmission, na fiasa toa ny fijerena ny fotoana, ny fanamarinana ny fanjifana CPU ary ny famerenana ireo angona hafa mahaliana ny rafitray.
Mba hametrahana azy ao amin'ny rafitray dia tsy maintsy soratantsika:
Este dia singa iray ao anatin'ny GnomeFlashback ary manome takelaka sy applet default ho an'ny tontolon'ny birao Gnome.
tontonana dia ampiasaina hanampiana applet, toy ny baran'ny menio hanokafana fampiharana, famantaranandro ary applet mpanondro Izy ireo dia manome fidirana amin'ny fikirakirana ny fiasan'ny rafitra, toy ny tamba-jotra, feo na fisehon'ny fitendry ankehitriny. Ao amin'ny tontonana ambany matetika dia misy ny lisitry ny fampiharana misokatra.
Raha te hametraka azy ao amin'ny rafitray dia mila manoratra fotsiny isika:
Es bara fanaovana maivana sy fanoloana tontonana ho an'ny Linux izay miasa toy ny dock irery. DockbarX esa fork of dockbar Ity dock ity dia mitondra ny lafiny rehetra amin'ny biraon'ny Windows 7 mankany amin'ny distro miorina amin'ny toerana tena tiantsika. Ny bara fiasa atolotry ny DockBarX dia miasa tanteraka ary kopia tonga lafatra amin'ny bara fitenenana Windows 7, mandika na dia topi-maso kely momba ny sary kely an'ny efijery efa nosokafanao nandritra ny fotoana aza.
Entre ny asany lehibe hitantsika:
Apetaho amin'ny zana-tsipika ny fampiharana
Fidirana haingana amin'ireo antontan-taratasy vao haingana, mifandraika ary be mpampiasa indrindra amin'ny fanampian'ny Zeitgeist
Fanohanana ny lisitra mirindra sy ny badge ary ny bara fandrosoana
Previews Window (Mitaky Plugin Compatibility KDE Compizility sy CCSM izay ampiasain'ny CCSM) - Ity endri-javatra ity dia miaraka amin'ireo kinova Compiz farany
Ny fametrahana azy dia soratantsika fotsiny:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » 6 amin'ireo dock malaza indrindra ho an'ny Ubuntu sy ny derivatives
pedruchini dia hoy izy:
Tsy azoko mihitsy hoe inona ny tombotsoan'ny dock mifanohitra amin'ny bara fiasa. Ary talohan'ny nampiasako ilay paoma manaikitra.
Mamaly an'i pedruchini
Brian FG287 dia hoy izy:
Azoko apetraka amin'ny ubuntu 16.04 ve ity dock farany ity? Tsy mahita na inona na inona amin'ny Internet aho
Valiny amin'i Braian FG287
Saola chavez dia hoy izy:
Midina ny repo dockbarx, tsy maintsy nesoriko ny .deb http://ppa.launchpad.net/nilarimogard/webupd8/ubuntu/pool/main/d/dockbarx/dockbarx_0.92-1~webupd8~xenial4_all.deb
Valiny tamin'i Saul Chavez
Tsy maintsy apetraka koa izy io
ary mila fiankinan-doha bebe kokoa
Iray amin'ireo tombony azo amin'ny fampiasana dock amin'ny bara fiasa handefasana rindranasa ny fahafaha-manangona mpikaroka izay ao anatin'ny sokajy iray ihany. Noho izany, misy toerana ao amin'ny bara voafetra ho an'ny applet hafa, sns.
Miguel Angel dia hoy izy:
Hitako am-pahatsorana ho zavatra kanto kokoa noho ny fiasa io. Mampiasa Kairo aho, saingy satria tiako be io, ankoatry ny sary 3D dia tsara kokoa amin'ny Dock ireo. Ho an'ny ambiny dia mitovy ihany izy io.
Valiny tamin'i Miguel Angel
Ny lalao Nintendo 64 malaza Turok dia tonga amin'ny Linux miaraka amin'i Steam
Qalculate: calculator loharano mahery sy malalaka